Umatshini weMask ozenzekelayo (omnye kwababini) Abavelisi kunye nabaThengisi -iFektha yeTshayina-iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa nokuThengisa ngaphandle, Co, Ltd.
Ikhaya > Iimveliso > Umatshini wemaski > Oomatshini abazenzekelayo beMask (enye kubabini)
Oku kulandelayo malunga noMatshini we-Mask ozenzekelayo (omnye kwababini) onxulumene, ndiyathemba ukuba uya kukunceda uqonde ngcono uMatshini Wokuzenzekelayo Mask (omnye kubini).
Umatshini wokuzenzekelayo oomatshini (omnye kwababini)
Inkqubo yokuvelisa ezenzekelayo, imigca emibini yokukhupha, ukuphuma okuphezulu
Umatshini wokuzenzekelayo oomatshini (omnye kwababini) product introduction
Umatshini wokuzenzekelayo ozenzekelayo (munye mbini), usebenzisa i-servo kunye nenkqubo yolawulo lwamaqondo ashushu rhoqo ukulawula umxholo ukusuka ekungeneni â † 'ekwakheni â †' ukubhoboza ulawulo lwenkqubo ye-PL. Yonke inkqubo yemveliso isebenze ngokuzenzekelayo. Iimpawu zemveliso yomatshini wemaski Umatshini wemaski yinkqubo yokwenza imaski eyahlukeneyo esebenza ngokufayilwayo kusetyenziswa iinkqubo ezinjengokushushuva okucinezelweyo okusongelayo, iwelding ye-ultrasonic, ukususa isikhuhli, kunye nokuxhuma kwamacangci endlebe. Umgangatho wokuveliswa kweemaski ziingceba ezili-110 / imizuzu nangaphezulu, kwaye izinga lokuphumelela lingaphezulu kwe-98%, elinokuphinda kabini ukusebenza ngempumelelo kwemveliso efanayo.
Umatshini wokuzenzekelayo ozenzekelayo (omnye kubini) -Inzuzo yokuvelisa
1. Inkqubo ye-servo kunye neenkqubo zokulawula ubushushu ezamkelweyo zilawulwa yinkqubo ye-PLC ukwenza ukuba impahla ingangeni ekuthini "welding" pun
2. Iqonga lolawulo lobukrelekrele, kulula ukufunda nokusebenza, ngumntu omnye kuphela onokusebenza;
I-3, ukuqina okuphezulu kwemveliso, imigca emibini yokuphuma ngexesha elifanayo ukwandisa kakhulu imveliso;
4. Isantya sokuvelisa iimaski ngama-110 iziqwengana / imizuzu nangaphezulu, kwaye umgangatho ovunyiweyo ungaphezulu kwe-98%.
Umatshini wokuzenzekelayo oomatshini bokuzenzekelayo (enye ibe mbini) -Umgaqo weProduct
Ukusebenza kakuhle: 110 ii-pcs / min
Ubungakanani boomatshini 7000 * 2700 * 2000mm
Iifayile ezishisayo: Umatshini wo Mask ozenzekelayo (omnye kubabini), abaVelisi, abaThengi, iiVenkile zeVenkile, iiFesi, i-China, ezenziwe eTshayina, amaxabiso, Uluhlu lwamaxabiso, ikowuti, I-FDA
umatshini wokulahla ubuso obuzenzekelayoUbuso obuzenzekelayo beMask Machineumatshini ozenzekelayo wokulahla inkunkumaumatshini wokulahla imaski
Umatshini wokuzonwabisa weNdebe yeMaski
Umatshini wePlani yeMaski yeKhadi
Umgca wokuveliswa kwemaski
Umatshini wokuzenzekelayo weMask
Umatshini wemaski weN95